Isicelo -Shenzhen Radiant Technology Co., Ltd.
STATION & ISIBHEDLELE
Iindwendwe Transport kunye Amava ogxile kunye Eyokugqibela kwi LED Bonisa Technology
Ooh nebhodi digital
Uyabengezela iyazidla ukunika ezahlukeneyo izisombululo ukuze phezulu kwethu imiqondiso umgca LED. Kukho izinto ezibalulekileyo ingqalelo xa emisela ukuba isigqibo kuhle wena nebandla lakho. Isisombululo uphawu LED kaThixo ikwabizwa ngokuba oko Pixel Pitch. Pixel Pitch i zemilinganiselo milimitha ukuba esilinganisa va zeqela ngalinye LED. Ngenxa yoko, le incinane inombolo millimitha, kungona ukusonjululwa umqondiso apho njengoko kuya kubakho LED ngaphezulu nganye indawo zomphandle kunye LED ezitransparenti ezingqongqo kunye. Ipropu pixel pitch kwi resolution LED uphawu aphezulu aya kukuvumela ukuba ukubonisa imizobo eneenkcukacha ngakumbi nesiqulatho crisper kwi umqondiso wakho, nokuba square video ulinganiselwe. ibonisa zethu zokusombulula eziphakamileyo kwakhona kakuhle ezifanelekileyo kwiindawo kunye nezithintelo isithuba, nokuba imimiselo ucando okanye ngenxa isakhiwo esikhoyo.
iimyuziyam Modern, amaziko, kunye namava amaziko Umbuliso iindwendwe neteknoloji entsha yevidiyo ukubonisa kunye Khazimla kwi phambili kwamabali yedijithali kwezi zikhewu. esenzelwe ngokukodwa imingeni ufakelo kwindawo yoluntu, Khazimla LED izisombululo bonisa akhulule imifanekiso ukuphefumla-ukuthatha kunye interactivity ukuba okunokutsalela ngayo, abantu bokusebenza, bokwazisa, kwaye ikhuthaze neendwendwe njengengazange ngaphambili xa kudalwa Ikhumbuleka amaziko kunye brand.
Kwihlabathi lanamhlanje, iivenkile Jewelry ukuba ndixinekile ukuba ukunika umntu azibandakanya uthenga kubaxumi - umntu oya kuba ezibonwayo, ngolwazi eyonwabisayo. Bephantsi koxinzelelo rhoqo ukwakha ubuhlobo yabathengi, isitshixo ayikho ukuze unciphise iindleko, oko kukunika amabali kunye qwa engcono izacholo. imiqondiso yedijithali unokungenelela ukunceda kwiivenkile izacholo ngokubonelela unxibelelwano nentsebenziswano izisombululo. Specialy ukubonisa transparent LED, ukubonelela ngesisombululo ukubonisa ogqibeleleyo nevenkile izacholo.
LED yedijithali uboniso lezobuchwepheshe ukwenza izinto ezintsha kwigumbi osasazo eludongeni yangasemva. Ngenxa Isisombululo ophezulu kunye nemfuneko ekumgangatho ophezulu, kwelizwi pixel encinane kunye nenkqubo nobuchwepheshe elichanileyo ukugcina umgangatho screen kumgangatho ophezulu. Ngelo xesha, usasazo na imfuneko indlela ekhethekileyo, ngoko kufuneka siqwalasele phambi kokuba kuyilwe nokuvelisa. Ukongeza, ulwenziwo kunye okudala kuyimfuneko.
Xa iimeko unqulo mihla, ubugcisa obubonwayo iye yaba yenye yeendlela ezininzi luncedo ukuzibandakanya amabandla. Njengoko ubonisa LED kuqhubeka ukuba ifikeleleke ngakumbi, izindlu ezininzi zonqulo jikelele lizwe ukudibanisa ibonisa ibandla LED ibe yimveliso unqulo lwabo njengesixhobo ukunxibelelana imiyalezo, iindaba, unqulo kunye nangaphezulu.
Capacity yinzwana Service
Ukuze nikeza inkonzo enye, ukusuka kuyilo, R & D, isisombululo pre-yokuthengisa abonisane, ukwenziwa, ukuthengisa, ukufakela, uqeqesho lobugcisa kunye nesikhokelo, inkonzo emva-kwentengiso.
Akunakwenzeka ukuba babalekele ihlabathi wedijithali namhlanje. Ukususela laptops ukuba Smartphones, ummi waseMelika okumndilili uye unxibelelwano digital ezininzi yonke imihla. Yaye millennials, isizukulwana eyafika yobudala ngexesha intanethi, ukunxibelelana oqhelekileyo uwuse na izinto abangazaziyo. Yinto nje zendalo kubo ukuphefumla. Ngoko ke, mhlawumbi ke akumangalisi ukuba zekholeji neyunivesithi neekhampasi baya ufuna ukungenisa imiboniso zedijithali amava kwiikholeji. iinkokeli University baqaphela ukuba kufuneka ukuba bathethe ulwimi labafundi beekholeji ze-yobudala ukutsala kubo, kunye nabafundi zanamhlanje kakuhle yedijithali.